कला/साहित्य – Sanibar News
‘दालभात तरकारी’ युनिट देश दौडाहामा निस्कँदै
Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/8/d667236683/htdocs/clickandbuilds/SanibarNews/wp-includes/formatting.php on line 3700
काठमाण्डाै – हास्य विधाको चलचित्र ‘दालभात तरकारी’ युनिटले आफ्नो प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएको छ । फागु पूर्णिमाका दिनदेखि प्रचारप्रसारको औपचारिक थालनी गरेको चलचित्र युनिट देश दौडाहामा निस्कने तयारीमा छ । हास्यकलाकार हरिवंश आचार्य, किरण केसी, शिवहरि पौडेल, जुनु रिजाल काफ्ले, आँचल शर्मा, पुष्प खड्कालगायतका कलाकारको टोली चलचित्र प्रचारप्रसारका लागि देश दौडाहामा निस्कन लागेको हो ।
चलचित्रका प्रस्तुतकर्ता एवम् कलाकार किरण केसीले यही चैत्र २५ गते पूर्वको बिर्तामोड, चैत्र २६ गते दमक, चैत्र २७ गते इटहरी, चैत्र २८ गते हेटौंडा, चैत्र २९ गते चितवन, चैत्र ३० गते बुटवल, वैशाख १ गते नेपागञ्ज, वैशाख २ गते दाङ र वैशाख ४ गते पोखरामा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने तयारी गरिएको बताए । देश दौडाहाबाट फर्किएपछि काठमाण्डौ उपत्यकामा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयेजान गर्ने चलचित्र निर्माण युनिटको तयारी छ ।
महसञ्चारको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रमा हरिवंश आचार्य, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, निरुता सिंह, प्रियंका कार्की, पुष्प खड्का, आँचल शर्मा, वर्षा राउत, किरण केसी, शिवहरि पौडेल, राजाराम पौडेल, बसुन्धरा भुषाल, सन्दीप क्षेत्री, यमन श्रेष्ठ, मोहितवंश आचार्य, जयनन्द लामा, शिशिर वाङ्देल, विल्सन विक्रम राई, सुरेन्द्र केसी लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।
चलचित्रको कथा, पटकथा तथा संवाद हरिवंश आचार्यले लेखेका हुन् । चलचित्रको निर्देशन सुदन केसीले गरेका हुन् । चलचित्रमा शम्भुजित बाँस्कोटाको संगीत छ भने दीर्घ गुरुङको छायांकन रहेको छ ।
कविराज गहतराजको नृत्य निर्देशन रहेको चलचित्रमा रमिला आचार्य, यमन श्रेष्ठ, नरेन्द्र कंसाकार, शिवहरी पौडेल, राजाराम पौडेल, दीर्घ गुरुङ, अनुरागमान सिंह कुँवर, शिशिर बाँदेल, विल्सन विक्रम राई, दिपेन्द्र खनियाँ र सुमित मैनालीले लगानी गरेका छन् ।
पत्रकार–संगीतकारले गरे भरत र ‘साँइला’ को प्रसंशा
काठमाडौँ – गायक भरत परियारको स्वरमा हालै बजारमा आएको साँइला बोलको गीतका बारेमा पत्रकार-संगीतकार, एरेन्जरहरुले खुलेर प्रसंशा गरेका छन्। गायक परियारले रोजगारीको सिलशिलामा परदेशमा पुगेका करिब ६० लाख नेपालीहरुको जीवन भोगाइ, भोग्नु परेका पीडा, सहनुपरेको दुःख, पराइले गर्ने तल्लो स्तरको व्यवहारलाई समेटेर ‘साँइला’ बोलको गीत बजारमा ल्याएको भन्दै उनीहरु प्रसंशा गरेका हुन्। यसरी प्रसंशा गर्दै गीतको सफलताका लागि शुभकामना दिनेमा गायक, संगीतकार सुरेश शाही, पत्रकार धनराज वास्तविक, राजु बोहरा, एमबी पुन, एरेन्जर लक्षु प्रकाश मल्ल, निर्देशक÷भिडियो सम्पादक वीरेन्द्र भाट ‘विपिन’, ग्राफर मणी नेपाललगायत छन्।
कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्ला, दमाचौरमा जन्मिएर हाल काठमाडौँमा कर्म गरिरहेका परियारले परदेशमा गएका नेपालीहरु स्वदेश फर्किने ठेगान नहुने र घरमा आफन्तहरुको अवस्था निक्कै कारुणीक रहने अवस्थालाई गीतमा मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ। ‘साँइला’ बोलको गीतमा घरमा आमा बिरामी परेकी हुन्छिन्, आमा छोराको पर्खाइमा हुन्छन् र छोरा विदेशमा गएर दुःख झेलिरहेको अवस्था हुन्छ। नातीनीले हजुर आमासँग आफ्नो बाबा परदेशबाट कहिले फर्किने भनेर जवाफ खोजिरहेकी हुन्छन् तर बिड्म्बना हजुरआमाले संसार छोडिसकेकी हुन्छन्।
कमजोर आर्थिक अवस्थाका नेपालीहरु आफ्नो पाखोबारी साहुको बन्धकीमा राखेर प्रदेशमा पुगेका प्रसँगहरु गीतमा समावेश छन्। परदेशमा आफ्नो कोही नहुने र के गरौँ, कसो गरौँ’ भन्ने खालका पीडाहरुले सताइरहने कुरा गीतमा उल्लेख गरिएको छ। गीतमा ‘साँइला’ नाम गरेको साथीलाई परदेशमा आफूहरुले भोगिरहेका दुःखहरु खानेथिए भन्ने खालको बचन गरिएको छ । गीतमा स्वदेशबाट श्रीमतीले घरैमै आउ भनिएको कुरालाई पनि समेटिएको छ । गीतमा पुरुष आवाज भरत परियारले लिएका छन् भआवाज पुर्णीमा परियारले दिइएकी छन् ।
कुलेन्द्र बिश्वकर्मा र गायिका सरिता कार्कीको आवाजमा ‘लाउँछ माया’लोकदोहोरी बजारमा
काठमाडौं । लोक तथा दोहोरी गायिका सरिता कार्की र कुलेन्द्र बिश्वकर्माको आवाजमा ‘लाउँछ माया’ बोलको लोकदोहोरी गीत भर्खरै मात्र बजारमा आएको छ । चर्चित लोकसर्जक शिव हमाल शब्द, संगीत रहेको उक्त गीत भर्खरै मात्र युट्युवमा सार्वजनिक गरिएको छ । ‘पुर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण, कहि गएनी बिर्सनै सकिन लाउछ माया नलाउने हैननी, माया तिम्ले वास्तै गर्दिनौ क्यारे मैले मात्रै सम्झेर भैननी’ यस्ता शब्द रहेको गीत गायिका स्वयं कार्कीको अफिसियल युट्युवबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।
यस्तै गीतमा नायिका सुरक्षा पन्त र महेन्द्र गौतमको अभिनय तथा नृत्य देख्न सकिन्छ । प्रकाश भट्ट्ले निर्देशन गरेको गीतमा नायिका सुरक्षा पन्त र मोडल महेन्द्र गौतमको अभिनय देख्न सकिन्छ । सुरक्षा पहिलो पटक लोकदोहोरी गीतको म्युजिक भिडियोमा देखिएकी हुन् । महेन्द्र सेन्टीमेन्टल गीतमा एक क्षत्र राज गर्न सफल मोडल हुन् । पछिल्लो समय उनी नाँचेको पनि देख्न थालिएको छ । यो गीतमा महेन्द्रको नयाँ स्वरुप देखिएको छ । जुन भिडियो देख्न सकिन्छ ।
अनमोल-सलिनमान भिडन्त, सलिन भन्छन्– ‘मेरो प्रतिष्पर्धा नम्बर १ सँग’,बरु हार्छु तर भाग्दिनँ
काठमाडाैं । नायक अनमोल केसी र नायक सलिनमान बानिया यतिखेर प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । दुवै नायक युवापुस्ता माझ हट केक हुन् युवा पुस्ताबीच यी दुई नायकहरुको छुट्टै छाप रहेको छ । यस्तैमा नायक सलिनमान बनियाँ अभिनित फिल्म यात्रा र अनमोल अभिनित फिल्म ए मेरो हजुर ३ एकै समयमा लाग्ने भएको छ ।
सलिनमान अभिनित चलचित्र ‘यात्रा’ चैत्र २९ गतेबाट रिलिज हुँदैछ भने सोही दिन अनमोल अभिनित चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ पनि रिलिज हुँदैछ । यो मितिमा अनमोल र सलिनको भिडन्त हुने भएपछि धेरैले प्रतिस्पर्धाको रुपमा पनि लिएका छन् । दुई फिल्मको प्रतिस्पर्धामा कसको जित कसको हार होला परिणाम हेर्न फिल्म रिलिज मिती सम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
तर, रोचक संयोग के जुरेको छ भने सलिनको डेब्यू फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ हो । अब उनको भिडन्त आफ्नै डेब्यू फिल्मको तेस्रो सिरिजसँग हुँदैछ । चलचित्र ‘यात्रा’को ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा सलिनको प्रतिस्पर्धा अनमोलको ए मेरो हजुरसँग हुने भयो के होला भन्ने प्रश्नको जवाफमा सलिनले भने ‘बजारमा मैले जित्छु कि हार्छु भन्ने चर्चा भइरहेको छ । बरु म हार्छु तर भाग्दिनँ ।’
उनी भन्छन्, ‘मेरो प्रतिस्पर्धा नेपालको नम्बर वान नायक (अनमोल केसी) सँग हो । त्यसैले नम्बर वान सँग हार्नु भनेको ठूलो कुरा गुमाउनु होइन ।’ उनले रोनाल्डो र मेस्सी पनि वल्डकपमा हारेको उदाहरण दिए ।
प्रेममा दिल भन्दा बिल धेरै भएपछि मोडल इच्छाराम परियारलाई तनाव
ओखलढुंगा – मोडल ईच्छाराम परियारलाई प्रेममा दिल भन्दा बिल धेरै भएसी तनाव भएको छ । भर्खरै सार्वजनिक भएको म्युजिक भिडियोमा मोडल परियारलाई आफ्नै प्रेमिकाले माया भन्दा बढी बिल तिर्ने बनाएकोमा गुनासो गरेका छन् । परियारको अभिनयमा माधभी जिसीको लोक दोहोरी गित तिम्रो माया गितको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
विश्व आनन्दको शव्द तथा लय सिर्जनामा गायक आनन्द र जिसीको सुमधुर स्वर रहेको गीतको म्युजिक भिडियोमा मोडल परियार र जिसीको अभिनय रहेको छ । म्युजिक भिडियो निर्देशक बिक्रम चौहानको निर्देशन तथा प्रकास खड्काको छायांकन रहेको छ । म्युुजिक भिडियोको सम्पादन मिलन बि. कले गरेका छन् । बि स्टार फिल्मस प्रा लिले निर्माण गरेको म्युजिक भिडियोको भावना म्युजिक सोलुसनले बजार व्यवस्थापन गरेको छ ।
भिडियो हेर्नुस https://www.youtube.com/watch?v=I50RMr-LoS
मलाई धोका दिँदा हुन्छ: धनराज वास्तविक
दुई अक्षरको माया भित्र दुई अक्षर कै पीडा हुन्छ ।
तिम्लाई खुसी मिल्छ भने मलाई धोका दिँदा हुन्छ।
एकनास हुन्न जिन्दगीको बाटो सधैं भरी ।
कहिलेकाहीँ बाङ्गो हुन्छ कहिलेकाहीं सिधा हुन्छ।
तिम्रो दिलमा चाेट लाग्दा यता मेरो मुटु दु:ख्छ ।
तिमी खुसी भाको बेला यो मन त्यसै फिदा हुन्छ।
काठमाडौँ । यही आगामी चैत्र २३ गते शनिबार हुन गईरहेको नेपाल चलचित्र कलाकार संघको निर्बाचनमा अध्यक्ष पदको लागि बर्तमान महासचिब अभिनेत्री सरिता लामिछानेले उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छिन ।
काठमाडौँमा चैत्र २३ गते हुन गईरहेको नेपाल चलचित्र कलाकार संघको अधिबेसनबाट नयाँ कार्य समितिको लागि उनले अधक्ष्य पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी हुन् । संघको विभिन्न कार्यसमितिमा बस्दै सक्रिय रुपमा कलाकारहरुको हकहितमा बुलन्द आवाज उठाउदै आएकी अभिनेत्री सरिता लामिछाने नेतृत्व सम्हाल्न सक्षम रहेकी चलचित्र वृतका बिज्ञहरु बताउछन ।
बिगत २ दशक देखि सक्रिय रुपमा चलचित्र क्षेत्र तथा कलाकारिता क्षेत्रमा रहेर सदैब कलाकारहरुको हितमा वकालत गर्दै आएकी उनि कलाकारितालाइ समेत निरन्तरता दिदै आगामी दिनहरुमा अझ बेशी सक्रियता जनाउदै कलाकारहरुको हक हीत र अधिकारको लागि सधै सपर्पित हुदै र कलाकार संघलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन पहल गर्ने अठोटको साथ आउने कार्यकालको लागि अधक्ष्य पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको अभिनेत्री सरिता लामिछाने बताउछिन ।
अधक्ष्य पदमा उम्मेद्वारी दिनको लागि पनि आफूभन्दा अग्रज कलाकार, पत्रकार, तथा समकालीन साथीहरुसंग सल्लाह सुझाब लिएर अगाडि बढेको र आफूलाई सहयोग गरि बिजय गराई दिनु हुन कलाकारहरु, पत्रकारहरु सबैमा अभिनेत्री लामिछानेले आग्रह समेत गरेकी छिन् । स्मरण रहोस उनि नेपाल चलचित्र कलाकार संघको ३० औ बर्षे ईतिहासमा पहिलो महिला महासचिब पदमा अत्याधिक बहुमतले बिजय गरेको पहिलो महासचिब हुन् ।
बर्षा सिवाकोटीको आक्रोश : मैले ठूलो कलाकार र मिडियाको सपोर्ट पाइन
काठमाडाैं । अभिनेत्री बर्षा सिवाकोटीले आफुले ठूलो कलाकार र मिडियाको सपोर्ट नपाएको गुनासो गरेकी छिन् । बर्षाले हालै फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखिन्– ‘न म स्टारको सन्तान, न कसैको प्रेमिका, न म हिट ब्यानरको रेगुलर सदस्य । न म कुनै युट्युव च्यानलको अफिसियल हिट अभिनेत्री । बस कामको परिचय बनाउन निरन्तर एक्लो लागिरहेको विचरा, सो कल्ड रिजर्भ आर्टिस्ट । अनि हलसम्म मेरा लागि किन जाने ? समयको बर्बादी । फिल्मको त के कुरा गर्नु हिट कलाकार, हिट मुभी ।’
बर्षा अभिनित फिल्म ‘पुरानो बुलेट’ गत शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आएको थियो । फिल्मले साचे अनुरुप ठूलो तहल्का मच्चाउन सफल नभएपनि औसत ब्यापार गरेको छ । यस्तैमा बर्षाले मिडियाले कसैको सामान्य कुराहरु पनि समाचार बन्ने कसैको भने हलमा फिल्म प्रदर्शनमा आउँदा समेत समाचार नबनेको भन्दै आक्रोश पोखेकी छिन् ।
स्ट्याटसमा उनले आफु कुनै कलाकारको छोरी नभएको र कसैसँग प्रेम सम्वन्धमा नरहेको कारण पनि ठूला कलाकार तथा मिडियाको नजरमा नपरेको भन्दै दुखेसो पोखेकी छिन् । “नाई नभन्नु ल २” बाट नेपाली फिल्म छेत्रमा पाईला टेकेकी बर्षा पछिल्लो समय फिल्मभन्दा पनि म्यूजिक भिडियोहरुमा बढी ब्यस्त छिन् । उनले आफु अभिनित प्रदर्शनरत फिल्म ‘पुरानो बुलेट’लाई दर्शकले राम्रो प्रतिक्रिया दिदा पनि मिडियाले प्रचार प्रसार गर्न सघाउ नपुर्याएको आक्रोश ब्यक्त गरेकी छिन् ।
चलचित्र ‘जानी नजानी’ चैत्र १ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा, प्रेमको बेग्लै ब्याख्या
काठमाडौं । माया–प्रेम, विछोड र जिम्मेवारीको कथामा आधार रहेर तयार भएको चलचित्र ‘जानी नजानी’ चैत्र १ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउने भएको छ । प्रेम र जीवनको सौन्दर्य साथै प्रेमको शक्तिले मानिसलाई सफलतातर्फ डोहोर्‍याएको कथालाई समेटेर निर्देशक बसन्त अधिकारीले चलचित्र तयार पारेका छन् ।
चलचित्रमा मनिष श्रेष्ठ, निरिषा बस्नेत, सन्नी सिंह, नम्रता श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी, कृष्णभक्त महर्जन, रोशनी केसीको मुख्य भूमिका छ । चिन्तन,साधना र लेखनमा क्रियासिल पुराना पत्रकार मोदनाथ खनालको मुख्य लगानी रहेको चलचित्र रोशनी इन्टरटेन्मेनटको ब्यानरमा निर्माण गरिएको हो । यसमा सागर काजी मालीले पनि निर्माणमा सहयोग गरेका छन् ।
चलचित्रको कथा, पटकथा तथा संवाद सामिप्यराज तिमिल्सेनाले लेखेका हुन् । संगीत अर्जुन पोखरेलले दिएका छन् भने सञ्जय लामाको छायाँकन, कविराज गहतराज, प्रविन सिंह र शिशिर खातीको कोरियोग्राफी तथा अर्जुन जिसीको सम्पादन रहेको छ ।
चलचित्रमा जिम्मेवारीबाट पन्छिएको एक धनाढ्य बाबुको छोरालाई यूवतीले कसरी जिम्मेवारी बहन गर्न सिकाउँछिन् भन्ने देखाइएको छ । चलचित्रमा पहिलो पटक लगानी गरेका मोदनाथ खनाल यसबाट आफूले सफलता प्राप्त गर्नेमा विश्वस्त छन् । मान्छेको जीवन नै नजानीकन सुरु हुने भएकाले नजानीकन नै लगानी गरेर सफलता पाउने उनको दाबी छ ।
फरक कथाबस्तु भएकाले दर्शकले रुचाइदिनेमा खनाल आशावादी छन् । प्रेम र जीवनको सौन्दर्यलाई चलचित्रले मजाले उठान गरेकाले प्रेमबाट उर्जा साथै सिर्जना मिल्ने भएकाले दर्शकहरुका लागि नयाँ स्वाद हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
हलेसी साईनो स्टारको उपाधी पुस्कलले जिते
ओखलढुंगा । हलेसी साईनो स्टार–२०७५’ को उपाधि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका १५ विजयखर्कका पुस्कल राईले जितेका छन् । खोटाङमा सम्पन्न हलेसी साईनो स्टार–२०७५’ मा सहभागी ११८ प्रतियोगीलाई पछि पार्दै राई हलेसी साईनो स्टार बनेका हुन् ।
शनिबार दिक्तेलस्थित सरस्वती माविको प्राङ्गणमा सम्पन्न ग्राण्ड फिनालेमा निर्णायकको ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत भोटिङको आधारमा गरिएको छनोटमा ओखलढुङ्गाका पर्शुराम गजमेर दोस्रो र बराहपोखरी गाउँपालिकाका सोम मगर तेस्रो भएका छन् । प्रथम हलेसी साईनो स्टार बनेका राईले नगद ५५ हजार ५५५ रुपैयाँका साथमा ट्रफी र प्रमाणपत्र तथा एउटा गीत रेकर्डिङ र एक वर्ष सँगीत कक्षा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
दोस्रो भएका गजमेरले नगद ३३ हजार ३३३ का साथमा ट्रफी, प्रमाणपत्र तथा एक वर्ष सँगीत कक्षा अध्ययन गर्ने अवसर पाएका छन् । प्रतियोगितामा तेस्रो हुनुहुने प्रतिभाले नगद १५ हजार ५५५ रुपैयाँका साथमा एक वर्ष सँगीत कक्षा अध्ययन गर्ने अवसरका साथमा प्रमाणपत्र र ट्रफी प्राप्त गरेका छन् ।
विजेतालाई प्रतिनिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराई, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिपनारायण रिजाल, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख विमला राई, दोस्रो पुरस्कारको प्रायोजक सबु गजमेर लगायतद्धारा पुरस्कार हस्तान्तरण गरिएको छ । जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहका ११ स्थानमा सञ्चालन गरिएको पालिकास्तरीय अडिसनबाट छानिएका ११८ प्रतियोगीमध्ये उत्कृष्ट ११ प्रतियोगीबाट हलेसी साईनो स्टारको टुङ्गो लगाइएको हो ।
गाउँ–गाउँमा लुकेर रहेका गायनका प्रतिभाको पहिचान र सम्बद्र्धन गर्दै गीत सँगीतको व्यवसायिक विकास गर्ने उद्देश्यले एकल गायन प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको आयोजक साईनो कला केन्द्रका अध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठले बताए । साईनो कला केन्द्र र हलेसी टाईम्स दैनिकको सहकार्यमा गत पुस ९ गतेदेखि २८ गतेसम्म पालिकास्तरीय अडिसन सञ्चालन गरिएको थियो । प्रतियोगिता जिल्लाका दशवटै स्थानीय तह तथा दाताहरुको आर्थिक सहयोगमा संचालन गरिएको थियो ।
विश्व सञ्चार परिषदको नेपाल च्याप्टर गठन, कार्यसमितिमा को–को ?
निर्मला हत्या प्रकरणको एक वर्ष, दोषी पत्ता लगाउन सरकार असफल
मकवानपुरमा भीषण वर्षा, बाटो अबरुद्ध, गाडीलाई खोलाले बगायो
Copyright © All rights reserved. | Smart Care by Smartcare.